Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Ny seranam-piaramanidina miatrika fandoroam-bola haingana
The International Air Transport Association (Iată) namoaka fanadihadiana vaovao mampiseho fa ny zotram-piaramanidina dia mety handoro $ 61 miliara amin'ny tahiry vola mandritra ny telovolana faharoa mifarana ny 30 Jona 2020, ary mamoaka fatiantoka trosa telovolana $ 39 miliara.
Ity famakafakana ity dia mifototra amin'ny valin'ny valiny IATA navoaka tamin'ny herinandro lasa teo, tao anatin'ny toe-javatra iray naharitry ny fameperana mafy nandritra ny telo volana. Amin'ity tranga ity, ny fangatahana herintaona dia latsaka 38% ary ny fidiram-bolan'ny mpandeha iray taona dia latsaka $ 252 miliara raha oharina amin'ny 2019. Ny fidinan'ny fangatahana no ho lalina indrindra tamin'ny telovolana faharoa, nisy fihenan'ny 71%.
Ho mafy ny vokatr'izany, entin'ireto manaraka ireto:
vola miditra andrasana hilatsaka 68%. Izany dia ambany noho ny fihenan'ny fangatahana 71% noho ny fitohizan'ny asa fitaterana entana, na dia mihena aza ny haavon'ny asa
Vidiny miovaova antenaina hidina mafy - eo amin'ny 70% eo ho eo amin'ny telovolana faharoa - mifanaraka amin'ny fihenan'ny fihenan'ny 65% ​​amin'ny fahaizan'ny telovolana faharoa. Ny vidin'ny solika jet dia nianjera koa, na dia manombana aza izahay fa ny hedging solika dia hametra ny tombony amin'ny fidinana 31%.
Fiantohana sy sarany raikitra sahabo ho antsasaky ny vidin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Manantena izahay fa ny vidin'ny semi-fix (anisan'izany ny vidin'ny ekipa) dia hahena ampahatelony. Manapaka izay azony atao ny seranam-piaramanidina, eo am-piezahana hitahiry ny mpiasa sy ny orinasa ho an'ny fanarenana amin'ny ho avy.
Ireo fanovana ny fidiram-bola sy ny vidiny ireo dia miteraka fahaverezan'ny vola mitentina 39 miliara dolara amin'ny telovolana faharoa.
Ambonin'ireo sarany tsy azo ihodivirana, ny seranam-piaramanidina dia miatrika famerenam-bola amin'ny tapakila famerenam-bidy nefa tsy ampiasaina vokatry ny fanafoanana be dia be vokatry ny fameperana nataon'ny fanjakana amin'ny dia. Ny trosa fahatelo amin'ny trosa dia ireo $ 35 miliara. Ho mafy ny fandoavana vola. Tombananay fa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mety may amin'ny $ 61 miliara ny fifandanjam-bola amin'ny telovolana faharoa.
“Tsy afaka mampihena ny vidiny haingana ny seranam-piaramanidina mba hijanonana mialoha ny fiantraikan'ity krizy ity. Izahay dia mijery fatiantoka mavesatra mitentina 39 miliara dolara amin'ny telovolana faharoa. Ny fiantraikan'izany amin'ny fandoroana vola dia hampitomboina amin'ny $ 35 lavitrisa tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny tapakila mety. Raha tsy misy fanampiana, ny volan'ny indostria dia mety hiharatsy hatramin'ny $ 61 miliara amin'ny telovolana faharoa, "hoy i Alexandre de Juniac, Tale jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA.
Governemanta marobe no mamaly tsara ny filan'ny indostria ny fepetra fanampiana. Anisan'ireo firenena manome fonosana fanampiana ara-bola na ara-dalàna ny indostria i Kolombia, Etazonia, Singapore, Aostralia, Sina, Nouvelle Zélande ary Norvezy. Vao tsy ela akory izay, Brezila, Kanada, Colombia, ary Netherlands dia namela fitsipika tsy manara-dalàna mba ahafahan'ny zotram-piaramanidina manolotra voucher mpandeha ho solon'ny tamberim-bola.
“Ny fitsangatsanganana sy fizahantany dia mikatona amin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa sy mbola tsy nisy toa azy. Mila renivola miasa ny seranam-piaramanidina mba hahavelona ny orinasany amin'ny alàlan'ny tsy fetezana mihombo. Canada, Colombia, and Netherlands dia manome tosika lehibe amin'ny fitoniana ao amin'io sehatra io amin'ny alàlan'ny famelana ireo kaompaniam-pitondrana hanolotra voucher ho solony famerenam-bola. Ity dia buffer tena ilaina amin'ny fotoana ahafahan'ny sehatra manohy miasa. Ho setrin'izany, izany dia hanampy amin'ny fitazonana ny fahafahan'ny sehatra handefa ireo entana entina manandanja amin'izao fotoana izao ary ny fifandraisana maharitra izay hiankinan'ny mpandeha sy ny toekarena amin'ny dingana fanarenana, "hoy i de Juniac.